Lahaanshaha qolka hudheelka + Jinsiyadda Montenegrin
MONTIS MOUNTAIN RESORT by Splendid - Dalxiis 5-xidig leh 238 qol ayaa laga dhisayaa meel u dhow buurta waqooyiga Montenegro, ee gobolka Kolasin, iyadoo lagu taageerayo barnaamijka gobolka "Muwaadinnimada Montenegrin ee Maalgashiga", taas oo tan loogu talagalay mashruuca waxaa loo idmay Sebtember 2020.
Iyadoo la raacayo shuruudaha barnaamijka, iibsashada qol (suite) oo ku yaal MONTIS MOUNTAIN RESORT ee Splendid oo ah qaddar dhan more 250 ama in ka badan ayaa suurtagal ka dhigeysa in la helo dhalashada Montenegrin (kharash dheeraad ah) maalgashadaha naftiisa, xaaskiisa iyo carruurta. Waxaa muhiim ah in la ogaado in maal-gashadehu uusan maalgelinaynin wax qayb ah, laakiin uu ku jiro hanti ku taal MONTIS MOUNTAIN RESORT ee Splendid, isagoo iibsanaya qol gaar ah (suite). Intaa waxaa dheer, qalabka guryaha ayaa lagu daraa qiimaha.
MONTIS MOUNTAIN RESORT ee Splendid waxaa maamuli doona kooxda caanka ah ee Splendid, oo damaanad qaadaya in dhakhso loogu soo noqdo tirooyinka faa iidada wanaagsan. Intaa waxaa sii dheer, hudheelka SPLENDID 5 * ee ku yaal koonfurta Montenegro, waxaa suurtagal noqon doonta in bilaash lagu sii joogo 1 toddobaad sanadkii sanadkii ugu horreeyay ka dib marka la sameeyo maalgashiga.
Ka dib marka la dhammeeyo dhismaha, bil bil ah ayay suurtagal noqon doontaa in lagu noolaado MONTIS MOUNTAIN RESORT oo ay bixiso shirkadda Splendid, tanina waa mid aad uga fog gunnada keliya ee maalgashade mashruucani leeyahay.
Iibsiga qol (suite) huteel MONTIS MOUNTAIN RESORT by Splendid lacag dhan € 250 ama ka badan ayaa fursad siinaysa in la codsado dhalashada Montenegrin (+ kharashyada dheeraadka ah) ee maalgashadaha, xaaskiisa iyo carruurta dhaqaale ahaan ku tiirsan.
Maalgashadu kuma maal gasho saami, laakiin waa hanti ku taal MONTIS MOUNTAIN RESORT ee Splendid, isaga oo iibsanaya qol gaar ah (suite).
Soo-saaraha ayaa ballan-qaadaya inuu siiyo maal-galiyaha 40% faa'iidada saafiga ah ee qolka ka sannad
Qiimaha qolka waxaa ku jira qalabaynta, waxaa lagu dhammaystiri doonaa iyadoo lagu saleynayo qorshe caadi ah, oo ku saleysan naqshadda gudaha ee horumarsan
Lacag lagama bixinayo dayactirka dhismaha, oo ka duwan mashaariicda kale ee iyaguna bixiya wax iibsiga
Ilaa mashruuca la dhammeeyo 2024, maalgashaduhu wuxuu ku noolaan karaa 1 toddobaad sanadkii hudheelka SPLENDID (koonfurta Montenegro).
Ka dib markii la dhammeeyo - 1 bil ah sanadkii MONTIS MOUNTAIN RESORT oo ay bixiso Splendid.
Sida ku xusan shuruudaha heshiiska, waxaa suurtagal noqon doonta in 5 sano lagu iibiyo qolka (suite).
Ama badbaadi maalgashiga oo sii wad inaad hesho boqolkiiba faa'iidada hudheelka.
Kolasin waa meel loo tamashle tago oo ku taal meel 73 km waqooyi ka xigta magaalada Podgorica oo ku taal dhinaca bidix ee webiga Tara ee joog sare oo ah 960 m oo ka sarreysa heerka badda. Waxay ku wareegsan tahay saddex saf oo buuro ah - Sinyavina, Komovy, Belasitsa.